Uma ufuna amahlaya amahle kakhulu kuwebhu, nayi iwebhusayithi emnandi kunazo zonke okufanele uyivakashele
Amahlaya amasha angcolile
Kubalulekile ukuthi abantu abaningi bazi ukuthi yini eqhubekayo manje ku-Intanethi ukuze baxoxe ngayo nabangane ngokuhamba kwesikhathi. Ngokuhlanganiswa kwethu kwama-memes uzakuhleka izinyembezi. ⚡ Uma ufuna ukuzijabulisa futhi uzigcwalise ngezinto ezinhle - woza kithi. Kunezinkulungwane zama-meme laphaya, konke okufuna ukukuhlekisa.
Bukela okuphakelayo kwethu okungapheli kwamakhathuni ahlekisayo, ama-memes kanye ne-demotivators ezihlokweni ezahlukahlukene nsuku zonke. Esizeni sethu uzohlala uthola ama-memes amasha sha, afanele nezithombe ezihlekisayo nje kusihloko sosuku. U-LIVE unesikhathi esiningi sokuchitha okuqukethwe ukukugcina uskrola futhi sabelana kuphela ngama-meme apholile kakhulu abamba ukunaka kwakho futhi angakuyeki.
Wonke umuntu uyawathanda amakati, ngakho-ke siqoqe izithombe zekati ezihlekisayo nama-meme ekati endaweni eyodwa. Buka ukuthi amakati enza kanjani izinto eziyinqaba nezihlekisayo ezingahleliwe, ngenhloso noma ngokungenhloso. Awukwazi ukubuka kuphela yonke i-nsfw ethokozisayo ehlekisayo, kodwa futhi ulande amavidiyo ngokuphelele mahhala kuwebhusayithi yethu.
Amahlaya abantu abadala kuphela izithombe
Ungakhathazeki, mngane onesithukuthezi! Amahlaya ayikhambi elihle hhayi kuphela isimo esibi, kodwa futhi nesikhathi eseqile. Kunzima ukucabanga indlela engcono esiza kulezi zinkinga ezinkulu zomuntu wanamuhla. Njengoba wazi, ukuhleka kwandisa ukuphila. Kuyasiza futhi kuyajabulisa ukubuka i-nsfw ehlekisayo yamahlaya. Amahlaya ayikhambi elihle kakhulu hhayi kuphela isimo esibi, kodwa futhi nesikhathi eseqile.
Unathi ngeke ube nesikhathi sokudinwa! Ukuphakelwa kwezindaba okungapheli okunokuqukethwe okuthakazelisayo nokuhlukahlukene kukulindile. Qaphela ama-meme ahlekisayo nawo wonke amathrendi amanje. Ingabe ufuna ukwabelana ngokuthile nendawo okuzungezile? Thumela noma yisiphi isithombe noma i-nsfw ehlekisayo oyithandayo emizuzwaneni embalwa futhi ubone ukuthi amazwana anobuthi akuguqula kanjani ube umenzi wethrendi.
Ukhathele ukuba nabangane abaxoxa ngama-memes ongawazi? Nge-U LIVE wena ozokwazi mayelana nama-memes amasha phakathi kokuqala. Kukhona okuthile okukhona kuwo wonke umuntu - kusuka kubanga eliphansi kuya phezulu kanye nokusuka kushizi kuya ekusikeni ukubhuqa.
Sonke siyayithanda i-anime futhi siyibuka njalo. Ama-memes ama-anime amnandi kakhulu akulindile, ngakho-ke ziqiniseni ukuze nibone amahlaya ajulile e-anime.
Ukuhlekisa akusho ukubamba ngekhanda amahlaya nokuwafaka ezingxoxweni. Umqondo omuhle wamahlaya uphendula ukugeleza kwengxoxo ngezindlela ezakhayo nezijabulisayo. I-U LIVE iyinkundla enikeza noma ngubani ikhono lokusho izinto ezithile ezihlekisayo futhi abone izinhlangothi ezihlekisayo zezinto. Futhi unokuchofoza okukodwa nje ukujoyina.
Imigomo Yokusebenzisa Inqubomgomo yobumfihlo Creator agreement Usizo Nokusekelwa
Yiba ngumsakazi Yenza imali ngokuqukethwe Amahlaya angcolile Isilwane esihlekisayo Funny baby Ikati elihlekisayo Inja ehlekisayo Funny meme